नयाँ सभामुख बनाउन नेकपाभित्र गृहकार्य : नेम्वाङ, गुरुङ, सापकोटा र घर्तीको दाबी - Manaslu Post
Manaslu Post २८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०८:०७ 146 पटक हेरिएको
काठमाडौं । रिक्त रहेको सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तारूढ दल नेकपामा आन्तरिक गृहकार्य थालिएको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुव्र्यवहार प्रकरणमा मुछिएपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । महराको राजीनामासँगै सभामुख पद रिक्त रहँदै छ ।
सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद त्याग गर्नुपर्ने भएपछि नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर सभामुख आफूले राख्ने गरी नयाँ सभामुखका लागि छलफल अघि सारेको हो ।
सभामुख पदमा अब को आउला भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको समयमा सोमबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा समेत सभामुखको विषयले प्रवेश पाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको विषयमा समीक्षा भएको थियो । त्यसक्रममा सभामुखबारे समेत छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उता, अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि नेम्वाङप्रति सकारात्मक छन् । तर, उनीमाथि तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्रबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने दबाब बढी छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा र ओनसरी घर्ती लबिङमा छन् । नेकपाबाट अहिले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे छिन् । नेकपाले सभामुखमा दाबी गर्ने हो भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि सभामुखमा माओवादी र उपसभामुखमा तत्कालीन एमालेले उम्मेदवारी दिएका थिए भने सोहीअनुसार जित पनि हासिल गरेका थिए । तर, अहिले भने दुवै दल मिलेर नेकपा बनिसकेको छ । अब नेकपाबाटै सभामुखको उम्मेदवार दिन पाइनेछैन । यस्तो अवस्थामा उपसभामुख डा. तुम्वाहाम्फेलाई समेत सभामुखको उम्मेदवारी दिन लगाएर उपसभामुख पद खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखले राजीनामा दिन सभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि सभामुखले राजीनामाको साटो उम्मेदवारी दिएर आफ्नो पद खाली बनाउनुपर्ने हुन्छ ।